Hei Twitter, Ndizamile iiNtengiso kwaye nantsi into eyenzekileyo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Meyi 18, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ndifundile uphononongo oluxubekileyo kwiNtengiso yeTwitter. Ndingakhange ndiyisebenzise ngokwam, ndacinga ukuba kufanelekile ukunika umpu. Ndingathanda ukutsala abanye abantu kwiakhawunti yeTekhnoloji yeNtengiso yeTwitter kwaye ndifuna ukubona ukuba ingaba ezinye iintengiso zinganceda. Ndicinga ukuba andizukuyifumana.
Hee @TwitterAds, ndizamile ukuchitha imali nawe kodwa akwavuma
Ndijonge ngononophelo kukhetho lokucoca ukunciphisa abaphulaphuli bam. Ndikhethe ukuthengisa njengecandelo, ndibeka amagama aphambili kwiindidi zethu ekujolise kuzo, ndaze ndabonelela ngamanye amaakhawunti omsebenzisi ukuzama ukutsala abalandeli babo nabo.
Ukugqiba kwam ukujolisa, ndanikwa ithuba lokukhetha enye yeeTweets zam, okanye ndakhe eyam. Ndikhethe ukuzenzela. Kwakhona… ndichithe ixesha elininzi ndisenza umyalezo wokuvavanya kunye nomfanekiso omhle kuwo.
Kwaye ke ndizamile ukupapasha iKhadi leTwitter… qaphela impazamo:
Akukho ngxaki, nditsho kum. Ndabona ukuba kukho iqhosha lokusindisa umkhankaso wakho ngasekunene. Ke, ndicofa ugcino kwaye… qaphela impazamo:
Andinalwazi kwaphela ukuba ndenzeni ngoku. Andikwazi ukugcina wonke umsebenzi endiwenzileyo ndijolise kwiphulo kwaye andinako ukugcina wonke umsebenzi endiwenzileyo kuyilo.
tags: TwitterIntengiso ye-twitter iyasilelaIintengiso ze-twitterIntengiso ye-twitterUkusilela kokuyila kwe-twittertwitter iyasilela
gShift: Isifundo semeko kwi-SaaS yokuSebenza kweZona ndlela ziBalaseleyo
Meyi 20, 2016 kwi-3: 33 AM
Awukho wedwa! Ndiqhuba iintengiso ze-Twitter, ngamaxesha athile kum, ubukhulu becala kubathengi kwaye ngokwenene, buggy ngokwenene. Bendisaziwa ukuba ndihamba ngumsindo ixesha emva kwexesha. Kufuneka bayilungise ngokwenene le nto ukuba baza kwenza imali.